गोरखाको रुई गाउँ कसरी तिब्बतको भयो? – Online Sunapati
मुख्य पृष्ठ /News/गोरखाको रुई गाउँ कसरी तिब्बतको भयो?
काठमाडौं, असार ९-रुई गाउँ नेपालको थियो, खोइ कसरी हो चीनप्रशासित तिब्बतको अधीनमा पुग्यो।पराईको शासन खप्न नसक्ने स्थानीय त्यहाँबाट भागेर साम्दोमा आई बसे। उनीहरूले ६० वर्षसम्म आफ्नो थातथलो बिर्सिएका छैनन्।
त्यसो त रुईवासी पनि समय–समयमा यता आउँछन्, साम्दोवासी पनि रुईतिर गइरहन्छन्। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा गोरखाबाट शिव उप्रेतीले लेखेका छन्।
एउटै गाउँ छुट्टिएर दुईवटा हुनुपर्दा साम्दोवासीको चित्त दुखाइ छ। आफ्नो पैतृक थलो तिब्बतको अधीनमा हुँदा कसैको पनि चित्त नबुझेको स्थानीय निमा दोर्जे लामा बताउँछन्।
‘पहिले त हामी एउटै हो नि’, चुमनुब्री गाउँपालिका–१ का जनप्रतिनिधिसमेत रहेका लामा भन्छन्, ‘तर, पछि चाइनाको भयो। नेपाल सरकारले आफ्नै गाउँ किन तिब्बतलाई दियोरु किन दाबी गरेन रु हामीले केही बुझ्न सकेनौं।’
उनका अनुसार रुईको जमिन असाध्यै उर्वर छ। त्यसकारण पनि साम्दोवासीले रुई मन पराउँछन्। ‘त्यहाँ सबैभन्दा ठूलो एउटा गुम्बा छ। फा तेगा गुम्बालाई बाउ गुम्बा भन्छन्।
ल्होको बुनाक्छा गुम्बालाई छोरा गुम्बा भन्छन् र बिहीको मामानिखाङ गुम्बालाई आमा गुम्बा भन्छन्’, उनी भन्छन्, ‘डोल्पा, मुस्ताङ, मनाङदेखिका लामा गुरुहरू त्यहाँ अध्ययन गर्न आउँछन्। सबैभन्दा ठूलो अध्ययन केन्द्रजस्तै हो त्यो गुम्बा तर नेपालले गुमायो।’
रुई भोटभित्र चारवटा टोल छन्। सबैमा गरेर १ सय ७० घरधुरी रहेको उनी सुनाउँछन्।
सरकारले वास्ता नगरेपछि चुपचाप सहनुपरेको स्थानीयको गुनासो छ। ‘यति ठूलो गाउँ छ, यति ठूलो गुम्बा छ। यताभन्दा राम्रो खेती हुने जमिन छ तर सरकारले वास्तै गर्दैन। हामीले के गर्न सक्छौं ररु’, उनी भन्छन्, ‘पहिलेदेखि मुद्दा बनाइरहेको भए अहिले ब्युँताएर पाउन सकिन्थ्यो। अब ६० वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। यति बेला मुद्दा उठाएर के गर्ने रु चाइना सरकारसँग दुस्मनी गर्नु मात्रै हुन्छ।’
कोरोना कहाली : काठमाडौंको बिभिन्न क्षेत्रमा अनगुमन सुरु, आमा समूहलाई सक्रिय बनाउने तयारी
आज २०७७ भदौ ६ गते शनिबारको राशिफल